di Davide Sabbatini - November 6, 2021
"Ndị mmụọ ọjọọ nọ na-awakpo m“, onye na-apụnara mmadụ ihe kwuru,” yabụ m were Rosary m jide ya n’aka m. Ozugbo ahụ, e meriri ndị mmụọ ọjọọ ahụ wee gbalaga ”.
San Bartolo Longo, Onye-ozi nke Rosary, nwere oke mmụọ nke mmụọ ọjọọ. E mewo ka ọ ghọọ Okwukwe site n'omume Setan. Ma echiche nke ịnọgide na-edo onwe ya nye Setan na nke a kara aka na ọkụ mmụọ gbasasịrị ya. Ọ nọ na njedebe nke nkụda mmụọ na igbu onwe ya. Enweghị olileanya malitere gụ Rosary. Ọfọn, nraranye ya na Rosary chụpụrụ mwakpo uche mmụọ ọjọọ ma bụrụ ngwá ọrụ nke ụzọ ya maka ịdị nsọ.
O dere Pope Pius XI: "Rosary bụ ngwa ọgụ dị ike iji mee ka ndị mmụọ ọjọọ gbapụ". Padre Pio Ọ sịrị: "Rosary bụ ngwa ọgụ ụbọchị ndị a".
N'oge a na-eme ọpụpụ, mgbe onye ụkọchukwu na-agụpụta emume nsọ, anyị na-enwekarị ndị nkịtị na-agụ chaplet. Gabriel Amorth, bụ́ onye bụbu onye a chụrụ n’àjà na Rom, chetara mgbe ya na Setan zutere. Ajọ Onye ahụ, bụ́ onye a manyere ikwu eziokwu, kwuru, sị: “Onye ọ bụla Ave Maria del Rosario ọ bụru m isi; ọ bụrụ na Ndị Kraịst maara ike nke Rosary, ọ ga-abụ m ọgwụgwụ!”
Ndị na-achụpụ ihe bụ́ ndị Setan lekwasịrị anya kpọmkwem. N'ozuzu, a na-echebe ha mana ha nwere ebumnuche mmụọ ọjọọ n'azụ ha. “Kwa abalị, m na-efesa ụlọ m mmiri dị nsọ ma na-akpọku Virgin na Saint Michael. M na-ehikwa ụra, ka m na-aga ụbọchị dum, ji rosary n'aka m."
Di Stephen Rossetti.
Ntụgharị si na saịtị ahụ Catholicexorcism.org.